The Kpop Times Media - Idol Profile
အကြိုက်ဆုံး စီနီယာ Idol နဲ့ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်ဖြစ်ခဲ့ကြတဲ့ ဂျူနီယာ Idol များ
ကိုယ်အကြိုက်ဆုံး Idol နဲ့ တွေ့ဆုံရရုံတင်မဟုတ်ပဲ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်သူငယ်ချင်းတွေ ဖြစ်လာခဲ့မယ်ဆိုရင် ဘယ်လိုနေမလဲ။
Idol တွေကို ချစ်ခင်နှစ်သက်အားကျကြတဲ့ Idol များ
K-Pop Idol တွေဟာပရိသတ်တွေဆီကနဲ့ အင်တာဗျူးတွေမှာ သူတို့ရဲ့ စိတ်ကူးထဲက ယောကျ်ားလေး/ မိန်းကလေး ပုံစံတွေကို မကြာခဏအမေးခံရပါတယ်။
Idol အရောင်ကြောင့် ပါးပြောင်ခဲ့ကြတဲ့ ထုတ်ကုန်ပစ္စည်း (၇) မျိုး
အခုပြောပြမယ့် အနုပညာရှင်တွေကတော့ ပစ္စည်းတွေကို ကိုယ်တိုင်သုံးပြီးပဲဖြစ်စေ ကြော်ငြာတာပဲဖြစ်စေ အဲ့ဒီလိုလုပ်တဲ့အခါမှာ သူတို့ဟာပရိသတ်အပေါ်လွှမ်းမိုးမှုကောင်းလို့ ပစ္စည်းကိုအရမ်းအောင်မြင်သွားစေတဲ့အနုပညာရှင် ၇ ယောက်အကြောင်းနဲ့
မှတ်မှတ်သားသား Kpop Idol တို့၏ အဆိုအမိန့်များ
လူတိုင်းရဲ့ဘဝမှာ အခက်ခဲများစွာကိုဖြတ်ကျော်ရတဲ့အခါ အရာအားလုံးဆုံးရှုံးသွားသလိုမျိုး ခံစားရတဲ့ အချိန်တွေရှိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြန်ရပ်တည်နိုင်ပြီး ဘဝကိုရှေ့ဆက်လျှောက်နိုင်ဖို့ စိတ်ခွန်အားတစ်ခုခုကို တစ်ခါတစ်လေမှာ လူတိုင်းလိုအပ်ပါတယ်။
ပွဲဦးမထွက်ခင်ကတည်းက လူသိများခဲ့တဲ့ Idol (၅) ဦး
"I Live Alone" မှာ Kim Choong Jae ၊ "The Manager" မှာ Yoo Byung Jae ရဲ့ မန်နေဂျာ Yoo Kyu Sun ၊ "Heart Singnal 2" မှာ Oh Young Joo တို့လို ရသရှိုးတွေမှာ ပါဝင်လာရင်း နာမည်ကြီး လာခဲ့တဲ့သူတွေရှိပါတယ်။ တရားဝင် ပွဲဦးမထွက်ခင်အချိန်မှာတောင် နာမည်ကြီးခဲ့ကြပြီး အခုအချိန်မှာလဲ အောင်မြင်ကျော်ကြားနေကြတဲ့ အနုပညာရှင်ကြယ်ပွင့်တစ်ချို့ကို ကြည့်လိုက်ကြပါဦးနော်! "I Live Alone" မှာ Kim Choong Jae ၊ "The Manager" မှာ Yoo Byung Jae ရဲ့ မန်နေဂျာ Yoo Kyu Sun ၊ "Heart Singnal 2" မှာ Oh Young Joo တို့လို ရသရှိုးတွေမှာ ပါဝင်လာရင်း နာမည်ကြီး လာခဲ့တဲ့သူတွေရှိပါတယ်။ တရားဝင် ပွဲဦးမထွက်ခင်အချိန်မှာတောင် နာမည်ကြီးခဲ့ကြပြီး အခုအချိန်မှာလဲ အောင်မြင်ကျော်ကြားနေကြတဲ့ အနုပညာရှင်ကြယ်ပွင့်တစ်ချို့ကို ကြည့်လိုက်ကြပါဦးနော်!
အံ့သြဖွယ်ကောင်းလောက်အောင် ကိုရီးယားစကားကောင်းကောင်းပြောတတ်တဲ့ နိုင်ငံခြား Idol (၇) ဦး
ပရိသတ်တွေဟာ ကိုးရီးယားအနုပညာရှင်တွေရဲ့ အင်္ဂလိပ်စာစွမ်းရည်ကိုကြည့်တတ်ကြပေမယ့် တခြားနိုင်ငံ ကလာတဲ့ K-Pop အနုပညာရှင်တွေရဲ့ ကိုးရီးယားစကားဘယ်လောက်ကောင်းကောင်းပြောတတ်လဲဆိုတာကိုတော့ကြည့်ဖို့မေ့နေကြတယ်နော်။ ကဲ အခုပြောပြမှာက တခြားနိုင်ငံက လာပြီး ကိုးရီးယားစကားကောင်းကောင်း ပြောတတ်တဲ့ အနုပညာရှင် ၇ ယောက်အကြောင်းပါ။ ပရိသတ်တွေဟာ ကိုးရီးယားအနုပညာရှင်တွေရဲ့ အင်္ဂလိပ်စာစွမ်းရည်ကိုကြည့်တတ်ကြပေမယ့် တခြားနိုင်ငံ ကလာတဲ့ K-Pop အနုပညာရှင်တွေရဲ့ ကိုးရီးယားစကားဘယ်လောက်ကောင်းကောင်းပြောတတ်လဲဆိုတာကိုတော့ကြည့်ဖို့မေ့နေကြတယ်နော်။ ကဲ အခုပြောပြမှာက တခြားနိုင်ငံက လာပြီး ကိုးရီးယားစကားကောင်းကောင်း ပြောတတ်တဲ့ အနုပညာရှင် ၇ ယောက်အကြောင်းပါ။
အမြဲသတိရတမ်းတနေရမယ့် Jong Hyun ရဲ့ အမှတ်တရလေးတွေ
SHINee အဖွဲ့ဝင် Jonghyun ဟာ လူ့လောကနေ ထွက်ခွာသွားခဲ့ပေမယ့် ပရိသတ်တွေကတော့ သူ့ကိုသတိရဆဲပါ။ သူဟာအဆိုတော်ကောင်းတစ်ယောက်ဖြစ်သလို သီချင်းရေးဆရာကောင်းတစ်ယောက်လည်း ဖြစ်ပါတယ်။ သူဟာသီချင်းကောင်းတွေကိုသာချန်ခဲ့တာမဟုတ်ပဲ ချိုမြိန်တဲ့အမှတ်တရလေးတွေကိုပါချန်ခဲ့ပါတယ်။ ကဲ ကျွန်တော်တို့ ကိုပြုံးစေမယ့် ဘယ်လိုအမှတ်တရလေးတွေလဲ ဆိုတာကြည့်ရအောင်။